ယူနိုက်တက် နဲ့ မော်ရင်ဟို အတွက် တစ်ကယ်ပဲ ကစားပေး ချင်ခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန် စတား - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက် နဲ့ မော်ရင်ဟို အတွက် တစ်ကယ်ပဲ ကစားပေး ချင်ခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဘိုင်ယန် စတား
အင်တာ မီလန် အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ အိုင်ဗန် ပါရီဆစ် က သူဟာ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဦးဆောင် တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဆီ ရောက်ရှိ ဖို့ အတွက် အရမ်း ကို နီးစပ် ခဲ့ ပေမယ့် မပြောင်း နိုင်ခဲ့ ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဦးဆောင် ခဲ့တဲ့ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မြေဆီ မပြောင်းရွှေ့ နိုင် ခဲ့တဲ့ အတွက် တစ်ကယ် ကိုပဲ နာကျင် ခံစား ရကြောင်း ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်း ရဲ့ ကစားသမား သစ် ပါရီဆစ် က ဆက်လက် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ခရိုအေးရှား သားဟာ ယူနိုက်တက် ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ အတွက် အထူး သတင်း ကြီးသူ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ယူနိုက်တက် ကို ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ကိုင်တွယ် ခဲ့စဉ် က ပါရီဆစ် ဟာ ပေါ်တူဂီ သားရဲ့ နံပါတ် တစ် ပစ်မှတ် ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သူဟာ ယူနိုက်တက် ဆီ မပြောင်းရွှေ့ နိုင်ခဲ့ ပဲ လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ ဂျာမန် ထိပ်သီး ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်း ဆီကို တစ် ရာသီ အငှား နဲ့ ရောက်ရှိ နေသူ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ အခုတော့ ပါရီဆစ် က သူ့ရဲ့ ဆန္ဒ တွေ မပြည့်ဝ ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော် ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ ဘယ်လောက် အထိ နီးစပ် ခဲ့ သလဲ ? အရမ်း ကို နီးစပ် ခဲ့ ပါတယ် ဗျာ ။ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို က ကျွန်တော့် ကို ခေါ်ယူ လိုတယ် ဆိုတာ တစ်ကယ့် ကို အံ့အား သင့်ဖွယ် အရာ တစ်ခု ပါပဲ ။ သူ့ကို နိုး လို့ ပြောဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲ လွန်းတယ် လေ ”
” တစ်ကယ်တမ်း မှာတော့ ကျွန်တော် ဟာ တစ်ကယ် ပဲ ယူနိုက်တက် ဆီ ပြောင်းရွှေ့ လိုခဲ့ ပြီး သူ့ အတွက် ကစား ပေးချင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ကြီးမား တဲ့ လိဂ် တိုင်းမှာ ကစား ရဖို့ ဆိုတာ ကျွန်တော့် ရဲ့ အိပ်မက် တစ်ခု ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာ က မဖြစ်ပွား ခဲ့ ပါဘူး ” လို့ ပါရီဆစ် က ဖွင့်ဟ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အသက် 30 ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ပါရီဆစ် က ယူနိုက်တက် အသင်း ဆီ ဘာ့ကြောင့် မပြောင်းရွှေု့ဖြစ်ခဲ့ သလဲ ဆိုတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်း အရင်း တွေ ရှိနေ သေးကြောင်း အရိပ်အမြွတ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ဒါဟာ ကျွန်တော့် အတွက် တစ်ကယ့်ကို နာကျင် ခံစား စရာ ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာ ကို ကျွန်တော် အသေးစိတ် မပြောလို ပါဘူး ။ ကျွန်တော် ဟာ တစ်ကယ့် ကို မှန်ကန် လှတဲ့ အကြောင်း ပြချက် တစ်ခု ကို2နှစ် အကြာမှ ဆက်လက် ရှာတွေ့ ခဲ့ ပါတယ် ” လို့ ပါရီဆစ် က ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
အခုတော့ သူဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘွန်ဒက်စ် လီဂါ ပြိုင်ပွဲ ဆီကို ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ ပါပြီ ။ သူဟာ ယခင် တုန်းက ယာဂင် ကလော့ပ် ရဲ့ ဒေါ့မွန် အသင်း မှာ ကစားပေး ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဂျာမန် သားကို တစ်ကဟ် ပဲ ကျေးဇူး တင်ရှိ နေကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ကျွန်တော် ဟာ တစ်ကယ် ပဲ အဆင်သင့် မဖြစ်ခဲ့ ပါဘူး ။ ကျွန်တော် ဟာ တိုက်စစ် ကနေ ခံစစ် ဆင်း ကူဖို့ အတွက် ကစား ခဲ့တာ မဟုတ် ပါဘူး ။ ဒါဟာ နည်းလမ်း နှစ်မျိုး နဲ့ ကစား လို့ ရရှိ တဲ့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော် တစ်ကယ် ပဲ မသိရှိ ခဲ့ ပါဘူး ”
” ယာဂင် က ကျွန်တော့် ကို မော်ဒန် ဘောလုံး လောက အကြောင်း သင်ကြား ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အတွက် ကျွန်တော် သူ့ကို တစ်ကယ် ပဲ ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ ပထမ ရာသီ မှာ ဆု ဖလား နှစ်လုံး ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယ ရာသီ မှာ ဘာမှ ပြောင်းလဲ မသွားတဲ့ အချိန် ကျွန်တော် အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ ချင်ခဲ့ ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် အသင်း အတွက် ပုံမှန် ပွဲထွက် ကစား ချင် နေတဲ့ အကြောင်း သူ့ကို ပြောကြား ခဲ့ပါ သေးတယ် ။ အဲ့ဒီ အချိန် မှာ သူက ‘ ငါ မင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစား ပါတယ် ၊ ငါတို့ အဖြေ တစ်ခု ကို ရှာဖွေ သွားကြ မှာပါ ‘ လုိ့ သူက ပြန်ပြော ခဲ့တယ် လေ ” လို့ ပါရီဆစ် က ဖွင့်ဟ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုကျတကျ နဲ့ မျောရငျဟို အတှကျ တဈကယျပဲ ကစားပေး ခငျြခဲ့ကွောငျး ဖှငျ့ဟလိုကျတဲ့ ဘိုငျယနျ စတား
အငျတာ မီလနျ အသငျး ရဲ့ အားထား ရတဲ့ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား ဖွဈသူ အိုငျဗနျ ပါရီဆဈ က သူဟာ ဟိုဆေး မျောရငျဟို ဦးဆောငျ တဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဆီ ရောကျရှိ ဖို့ အတှကျ အရမျး ကို နီးစပျ ခဲ့ ပမေယျ့ မပွောငျး နိုငျခဲ့ ကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ဟိုဆေး မျောရငျဟို ဦးဆောငျ ခဲ့တဲ့ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မွဆေီ မပွောငျးရှေ့ နိုငျ ခဲ့တဲ့ အတှကျ တဈကယျ ကိုပဲ နာကငျြ ခံစား ရကွောငျး ဘိုငျယနျ မွူးနဈ အသငျး ရဲ့ ကစားသမား သဈ ပါရီဆဈ က ဆကျလကျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ခရိုအေးရှား သားဟာ ယူနိုကျတကျ ဆီကို ပွောငျးရှေ့ ဖို့ အတှကျ အထူး သတငျး ကွီးသူ ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ ယူနိုကျတကျ ကို ဟိုဆေး မျောရငျဟို ကိုငျတှယျ ခဲ့စဉျ က ပါရီဆဈ ဟာ ပျေါတူဂီ သားရဲ့ နံပါတျ တဈ ပဈမှတျ ကစားသမား ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ သူဟာ ယူနိုကျတကျ ဆီ မပွောငျးရှေ့ နိုငျခဲ့ ပဲ လကျရှိ အခြိနျ မှာတော့ ဂြာမနျ ထိပျသီး ဘိုငျယနျ မွူးနဈ အသငျး ဆီကို တဈ ရာသီ အငှား နဲ့ ရောကျရှိ နသေူ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ အခုတော့ ပါရီဆဈ က သူ့ရဲ့ ဆန်ဒ တှေ မပွညျ့ဝ ခဲ့တဲ့ အကွောငျး ဖှငျ့ဟ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ကြှနျတျော ယူနိုကျတကျ အသငျး နဲ့ ဘယျလောကျ အထိ နီးစပျ ခဲ့ သလဲ ? အရမျး ကို နီးစပျ ခဲ့ ပါတယျ ဗြာ ။ ဟိုဆေး မျောရငျဟို က ကြှနျတေျာ့ ကို ချေါယူ လိုတယျ ဆိုတာ တဈကယျ့ ကို အံ့အား သငျ့ဖှယျ အရာ တဈခု ပါပဲ ။ သူ့ကို နိုး လို့ ပွောဖို့ ဆိုတာ ခကျခဲ လှနျးတယျ လေ ”
” တဈကယျတမျး မှာတော့ ကြှနျတျော ဟာ တဈကယျ ပဲ ယူနိုကျတကျ ဆီ ပွောငျးရှေ့ လိုခဲ့ ပွီး သူ့ အတှကျ ကစား ပေးခငျြ ခဲ့ ပါတယျ ။ ကွီးမား တဲ့ လိဂျ တိုငျးမှာ ကစား ရဖို့ ဆိုတာ ကြှနျတေျာ့ ရဲ့ အိပျမကျ တဈခု ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့တာ က မဖွဈပှား ခဲ့ ပါဘူး ” လို့ ပါရီဆဈ က ဖှငျ့ဟ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ အသကျ 30 ရှိပွီ ဖွဈတဲ့ ပါရီဆဈ က ယူနိုကျတကျ အသငျး ဆီ ဘာ့ကွောငျ့ မပွောငျးရှေု့ဖွဈခဲ့ သလဲ ဆိုတဲ့ နောကျထပျ အကွောငျး အရငျး တှေ ရှိနေ သေးကွောငျး အရိပျအမွှတျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ဒါဟာ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ တဈကယျ့ကို နာကငျြ ခံစား စရာ ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့တာ ကို ကြှနျတျော အသေးစိတျ မပွောလို ပါဘူး ။ ကြှနျတျော ဟာ တဈကယျ့ ကို မှနျကနျ လှတဲ့ အကွောငျး ပွခကျြ တဈခု ကို2နှဈ အကွာမှ ဆကျလကျ ရှာတှေ့ ခဲ့ ပါတယျ ” လို့ ပါရီဆဈ က ဖှငျ့ဟ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
အခုတော့ သူဟာ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဘှနျဒကျဈ လီဂါ ပွိုငျပှဲ ဆီကို ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ ပါပွီ ။ သူဟာ ယခငျ တုနျးက ယာဂငျ ကလော့ပျ ရဲ့ ဒေါ့မှနျ အသငျး မှာ ကစားပေး ခဲ့သူ တဈဦး ဖွဈပွီး ဂြာမနျ သားကို တဈကဟျ ပဲ ကြေးဇူး တငျရှိ နကွေောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ကြှနျတျော ဟာ တဈကယျ ပဲ အဆငျသငျ့ မဖွဈခဲ့ ပါဘူး ။ ကြှနျတျော ဟာ တိုကျစဈ ကနေ ခံစဈ ဆငျး ကူဖို့ အတှကျ ကစား ခဲ့တာ မဟုတျ ပါဘူး ။ ဒါဟာ နညျးလမျး နှဈမြိုး နဲ့ ကစား လို့ ရရှိ တဲ့ နရော တဈျခု ဖွဈတဲ့ အကွောငျး ကြှနျတျော တဈကယျ ပဲ မသိရှိ ခဲ့ ပါဘူး ”
” ယာဂငျ က ကြှနျတေျာ့ ကို မျောဒနျ ဘောလုံး လောက အကွောငျး သငျကွား ပေးခဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ အတှကျ ကြှနျတျော သူ့ကို တဈကယျ ပဲ ကြေးဇူး တငျ ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ ပထမ ရာသီ မှာ ဆု ဖလား နှဈလုံး ဆှတျခူး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒုတိယ ရာသီ မှာ ဘာမှ ပွောငျးလဲ မသှားတဲ့ အခြိနျ ကြှနျတျော အသငျး ကနေ ထှကျခှာ ခငျြခဲ့ ပါတယျ ”
” ကြှနျတျော အသငျး အတှကျ ပုံမှနျ ပှဲထှကျ ကစား ခငျြ နတေဲ့ အကွောငျး သူ့ကို ပွောကွား ခဲ့ပါ သေးတယျ ။ အဲ့ဒီ အခြိနျ မှာ သူက ‘ ငါ မငျးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို လေးစား ပါတယျ ၊ ငါတို့ အဖွေ တဈခု ကို ရှာဖှေ သှားကွ မှာပါ ‘ လို့ သူက ပွနျပွော ခဲ့တယျ လေ ” လို့ ပါရီဆဈ က ဖှငျ့ဟ သှားခဲ့ ပါတယျ ။